स्वास्थ्यका दुबै सचिव एक सचिवको पक्षमा, १२औँ तहको दरबन्दी नबढाउन लबिङ – Health Post Nepal
२०७५ फागुन २८ गते १९:५९
संघीयता कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम प्रभावकारी बनाउँन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित मस्यौदालाई लिएर मन्त्रालयका दुई सचिवदेखि विभिन्न केन्द्र र महाशाखाका नेतृत्वले चासो जनाएका छन् । खासगरी स्वास्थ्यमा दुई सचिव, १२औँ तहको दरवन्दी बढाउँने, खरिदका काम गर्ने अधिकार कहाँ राख्ने भन्नेमा अधिकांशले चासो देखाएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन र परामर्शमा मन्त्रालयले तयार पारेको सस्यौदामा सचिव डा. पुष्पा चौधरी र अर्का सचिव चन्द्रकमार घिमिरेले समेत मन्त्रालयमा एउटै सचिव हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
मस्यौदामा एक जना स्वास्थ्य सचिव र दोस्रो सचिव जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तीबाहेक सचिव सरह नै मानिने प्रमुख विशेषज्ञको पद समेत मन्त्रालयमा चार वटा, स्वास्थ्य सेवा विभाग र प्रस्तावित रोग नियन्त्रण केन्द्रमा राखिएको छ । त्योबाहेक निश्चित केन्द्रीय अस्पतालमा समेत सचिव सरहकै दरवन्दी राख्ने योजना स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको छ ।
मस्यौदामा मन्त्रीसहित राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव र प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल एक ठाउँमा उभिएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको आकर्षण बढाउँन सचिव कम भएपनि प्रमुख विशेषज्ञ बढाउँनुपर्ने र अधिकारसहित सोही अनुसारका संरचना बनाउँनुपर्ने सोच मन्त्रीको छ ।
तर, अहिले नै लामो सयमदेखि १२औँ तह रिक्त हुँदा बढुवामा कुनै पहल नगरिएको अवस्थामा सचिव सरहका पद १२औँ तह बढाउन नदिने पक्षमा स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरी छन् । घिमिरे भने प्राविधिक जनशक्तिलाई बढुवाको अवसर सृजना गर्न प्रमुख विशेषज्ञ बढाउने तर सचिव पद भने एउटै हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्रालय अन्र्तगत हुने करोडौंको खरिद गर्ने पुरानो संरचनामा रहेको महाशाखा आपुर्ति विघटनसँगै नयाँ संरचनामा खरिदको काम कहाँ राख्ने भन्नेमा धेरै निर्देशकहरुको चासो छ । अहिले यो काम व्यवस्थापन महाशाखाले गर्दै आएकोमा नयाँ संरचनामा विभाग नै खारेज हुने र अधिकांश रोग नियन्त्रणका जिम्मेवारी मात्रै हुने भएको कतिपयले खरिदको काम मन्त्रालयमै केन्द्रीत गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
दुई सचिवसहित चार १२औँ तह (प्रमुख विशेषज्ञ) रहनेगरी चार विभाग र १३ महाशाखा प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी विभागको स्थानमा बन्न लागेको राष्ट्रिय रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्रमा ५ महाशाखासहित २७ शाखा रहने भएका छन् ।
तर, प्रस्तावित संरचनामा रोग नियन्त्रण केन्द्रबाट गर्नुपर्ने क्षयरोग, एचआइभीको औषधि, खोप खरिदको काम महानिर्देशक मातहतमै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । औषधि र नियमित सामग्री खरिदको बजेट स्थानीय तह र प्रदेशमा गएपनि केन्द्रीय सरकारबाट खरिद गर्ने सामग्रीका लागि मन्त्रालयमा पनि खरिदको शाखा राखिएको छ । यो शाखालाई रोगअनुसारकै महाशाखामा राख्ने वा मन्त्रालयमा केन्द्रीत गर्ने भन्नेमा निर्देशकहरुकै मत विभाजित छ ।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री भने उच्च राजनीतिक समर्थन र विश्वास लिएर मन्त्रालयको संरचनालाई अहिले तयार पारेको सस्यौदाअनुसार नै पारित गर्ने पक्षमा छन् । तर, दुबै सचिव र प्रशासनका कर्मचारी भने मन्त्रीको योजनाविपरीत मस्यौदामा हेरफेरको तयारीमा छन् ।
विभाग अन्र्तगत रहेको परिवार कल्याण महाशाखा मन्त्रालय अन्र्तगत आउने ल्याएर हाल छुट्टै केन्द्रका रुपमा रहेका निकायहरुलाई महाशाखाको रुपमा राख्ने सरकारी तयारी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको समस्यौदामा सर्ने र नसर्ने रोगका छुट्टाछुट्टै महाशाखा, एचआइभी÷एड्स कुष्ठरोग तथा यौनरोग नियन्त्रण महाशाखा, क्षयरोग नियन्त्रण महाशाखा र स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा संचार महाशाखा रहनेछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना फेर्ने तयारी, विभागको सट्टामा सिडिसी, १२औँ तहको दरबन्दी दोब्बर